Guyyaa har’aa, deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasetti namni haarawa corona virus due akka biy | KWIT
Siouxland District health akka gabaasaniti karoori talaali corona virus dhaaf kan itti aanu Monday, March 8th akka jalqabu Tyson keessati gabaasan. Qaxaaro qabachuu guyyaa borii seati 3p.m irraa online dhafi bilbilaan 712-234-3922 akka jalqabufi namni talaali kana fudhatus nama umriin isaani 65 sanii ol ta’aniidha, garuu hojattoota meat packing akka keesa jiran himan.
Kun Kanaan osoo jiru, Tyson food akka gabaasa baastetti torbaan kana irraa hojattoota kan kennamu akka tae himan, akkasumas Storm lake fi jiraattota Iowa keessa kan Tyson Dakota city keessa hojattan dabalatee.
survey ji’aa haaroyni akka mullisutti state Siouxland sadii keeessati economy akka guddataa deema jiru himan. Garuu itti gaafatmtooni business akka jedhenati kafaliin xiqqaachuu bakka meeshan irraa dhufu irra akka mulattu kun ammo soda akka itti fide himan. Creighton University mid-America Business Condition January 67.3 irraa February 69.6 gahee jira. galmeen kamuu parsanti 50 ol lakkaahamu guddina keessati lakkaahama, 50 gad ammo economy gad bu’uu kan mullisuudha.
April irraa jalqabe Sioux City Gateway Airport irraa gara Chicago balallii qaxittaa kennuudhaf SkyWest Airlanes U.S Deparament Transportation wajiin wagga sadihiif malatteesani jiran. SkyWest, reginal service United State kan ta’e American Airlans hin jifattee jira. American yeroo ammaati qarqarsa kan kenni seera sagaanta Air service irrati hundaaheti. Sagantaa kun kan uumamef qarqaarsa xixiqqaa ummata kennuudhafi. Skywest ammati Denver dhaaf hojii guyyaa guyaa hojachuufiti jira.
They demand for justice for Hachalu Hundessa who was murdered and for other Oromo leaders who have been jailed.